DMC-FZ70GC Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camera DMC-FZ70GC
အြနီးနှင့် အဝေး နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ကြီးကျယ်ခန်းနားသော အခိုက်အတန့်များ
ကင်မရာများထဲတွင်* 20mm No.1 Zoom Power နှင့်ဖြစ်ပြီး Super Telephoto 60x Optical Zoom ပါရှိကာ 1200mm ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် တုံ့ပြန်ချက် ရရှိစေနိုင်သော LUMIX DMC-FZ70
July 18, 2013 မှစတင်ထုတ်လုပ်သည့် digital camera တစ်လုံး
20mm Ultra Wide-angle and အားကောင်းသော အဆ 60 ထိဆွဲနိုင်သည့် Optical Zoom
DMC-FZ70 တွင် အဆ 60 ထိ ဆွဲနိုင်သော optical zoom (35mm camera equivalent: 20-1200mm) ဖြင့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဘက်စုံကောင်းမွန်သော LUMIX DC VARIO 20mm ultra wide-angle lens ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအားအပြည့်ဖြစ်သော ရှုခင်းဓာတ်ပုံများနှင့် အဝေးတွင်ရှိနေသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ဌက်များအား ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ 20mm ultra wide angle lens သည် 24mm မြင်ကွင်း angle ထက် 140% ပိုမိုကျယ်သော မြင်ကွင်း angle ကို ဖမ်းယူရရှိစေပါတယ်။
POWER O.I.S. Active Mode ပါဝင်သော
The POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer) သည် လက်တုန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော တုန်ခါမှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ DMC-FZ70 မှ ပေးနိုင်သော angular width သည် 1200mm super telephoto အား လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ရိုက်ကူးခြင်းကို ရရှိစေနိုင်သော ယခင်ကင်မရာ DMC-FZ60 ထက် 200% ပိုများပါတယ်။ DMC-FZ70 တွင် လမ်းလျှောက်နေလျှင်ပင် ကျယ်ပြန့်သော angle ဖြင့် ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးအား ယိုယွင်းစေခြင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသော Active Mode ပါဝင်ပါသည်။
လေကာမှန်ပါဝင်သော Zoom Microphone ဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံ ပါဝင်သည့် ရုပ်သံဖမ်းယူနိုင်ခြင်း
ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုများသည် အလွန်အမင်း အသက်ဝင်သော Dolby® Digital Stereo Creator နှင့်ဖြစ်ပြီး ယခင်ကင်မရာ DMC-FZ60 ထက် 70% လောက် လေသံကို လျှော့ချပေးတဲ့ အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ လေကာမှန် Zoom Microphone ကျေးဇူးကြောင့် DMC-FZ70 မှာ အသံစွမ်းရည် ပိုမိုပြီး ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ အပြင်ဖက်မှာဆိုလျှင် အလုံပိတ်ထားသော အထူးတည်ဆောက်ပုံဟာ လေတွေက မိုက်ခရိုဖုန်းကို တိုက်ရိုက်ထိခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို အတွင်းဖက်မှာဆိုရင် draft တည်ဆောက်ပုံက ကင်မရာအတွင်းဖက်တွင် လေများရှိနေခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ လေထန်တဲ့နေ့တွေမှာတောင် ဖမ်းယူထားတဲ့ အသံတွေက ပြတ်သားပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
• Dolby ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ လိုင်စင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Dolby နှင့် double-D သင်္ကေတများသည် Dolby ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အမှတ်အသားများ ဖြစ်ပါသည်။
AVCHD နှင့် MP4 Format များဖြင့် Full-HD ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး
DMC-FZ70 သည် AVCHD နှင့် MP4 format နှစ်ခုလုံးဖြင့် full-HD 1920 x 1080 ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးပါသည်။ အပေါ်ဘက်တွင်ရှိသော အထူးသီးသန့်ခလုတ်သည် ဓာတ်ပုံများရိုက်နေစဉ် ချိန်ညှိချက် တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ရန်မလိုပဲ ဗီဒီယိုများကို ချက်ချင်းရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။
16.1-megapixel High Sensitivity MOS အာရုံခံစနစ်
16.1-megapixel High Sensitivity MOS အာရုံခံအား DMC-FZ70 မှာ အသစ်ဖန်တီးထားပါတယ်။ image processing LSI Venus Engine နှင့်အတူ ၄င်းသည် DMC-FZ70 ၏ တုံ့ပြန်ချက်၊ အာရုံခံမှုနှင့် ဓာတ်ပုံစွမ်းရည်ကို ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်တစ်ခုအထိ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
လျှင်မြန်သော digital signal output နည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်းကြောင့် DMC-FZ70 mechanical shutter ဖြင့် 16.1-megapixel full resolution* ရှိသော9fps နှင့် continuous AF ဖြင့် 5fps ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ Light Speed AF ကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ လျှင်မြန်သော ကင်မရာ ဖွင့်ချိန်ကြောင့် DMC-FZ70 သည် လျှပ်တပြက် ရိုက်ကူးရမည့် အခွင့်အရေးများကို မည်သည့်အချိန်မှ လွဲချော်ခြင်း မရှိပါ။
* အများဆုံးဓာတ်ပုံ -3ပုံ
ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု / ဖန်တီး ပြင်ဆင်မှု
ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု / ဖန်တီး ပြင်ဆင်မှု တွင် စုစုပေါင်း filter အထူးပြုလုပ်ချက် 15 ခုဖြစ်သော Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Miniature Effect, Soft Focus, Star Filter နှင့် One Point Color တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ပြောင်းလဲထိန်းချုပ် မှ သင့်အား filter အထူးပြုလုပ်ချက် တစ်ခုဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစေနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံအား မည်သို့ကွဲပြားမှုရှိသလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုစေနိုင်ကာ ၄င်းအား ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖန်တီး ဓာတ်ပုံခဲထိုးခြင်းဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားလျှင်ပင် filter အထူးပြုလုပ်ချက်ကို အသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။
* Soft Focus အား ဗီဒီယို ရိုက်ကုးရာတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဖန်တီး Panorama ဖြင့် ယခင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထပ်ခြင်းဖြင့် အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက် Panorama တစ်ခုကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး Expressive、Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Soft Focus, Star Filter နှင့် One Point Color စသည်ဖြင့် filter အထူးပြုလုပ်ချက် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရာတွင် Optical Zoom အဆ 60 ချဲ့နိုင်ခြင်း
POWER O.I.S နှင့်ဖြစ်ပြီး အားကောင်းသော 60x optical zoom အား ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေးမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ DMC-FZ70 တွင် လမ်းလျှောက်နေလျှင်ပင် ကျယ်ပြန့်သော angle ဖြင့် ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးအား ယိုယွင်းစေခြင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးစေနိုင်သော Active Mode ပါဝင်ပါသည်။
ဖန်တီး ဗီဒီယို Mode
ဖန်တီး ဗီဒီယို Mode သည် သင်ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစဉ်တွင် Shutter အမြန်နှုန်းနှင့် အလင်းတံခါးကို စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါတယ်။
AR Coating နှင့် ကျယ်ပြန့်သော viewing angle ရှိသော 3.0-inch 460,000-dot Intelligent LCD သည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိ ဆိုးရွားသော ရိုက်ကူးရေးအနေအထားတွင်ပင် သက်သာသော စောင့်ကြည့်ရိုက်ကူးခြင်းရရှိသည်ကို သေချာစေပါတယ်။
DMC-FZ70 အား 202,000-dot equivalent high resolution, 100% field of view ပါဝင်သော 0.2-inch EVF (Electronic Viewfinder) ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ frame rate အား 30 fps မှ အများဆုံး 60 fps မြှင့်တင်ထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် စူးရှသော နေရောင်အောက်တွင် လျှင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုကို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် သင့်တော်သော ပမာဏအထိ ရုပ်ပုံထစ်ခြင်း လျော့သွားပါတယ်။
iA (Intelligent Auto) / iA Plus Mode တွင် ကင်မရာသည် ဓာတ်ပုံရော ဗီဒီယိုပါ ရိုက်ကုးနေစဉ်တွင် ရိုက်ချက်များကို ဖန်တီးရန်နှင့် အခိုက်အတန့်များကို ရိုက်ကူးရန် ကင်မရာသည် လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် iA Plus Mode သည် ရွှေ့သည့်ဘား(slider)ကို ရွေ့စေခြင်းဖြင့် defocusing area, exposure compensation နှင့် white balance ကို ချိန်ညှိစေနိုင်ပါတယ်။
DMC-FZ70 သည် Scene Mode တွင် HDR (High Dynamic Range) ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ များစွာသော exposure အဆင့်များတွင် ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ငြိမ်ဓာတ်ပုံများအား whiteout (over-exposure) သို့မဟုတ် blackout (under-exposure) မဖြစ်စေပဲနှင့် စုစည်းထားသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
LUMIX DMC-FZ70 သည် ရိုက်ကူးရေးအခြေအနေနှင့် ရိုက်ကူးရေးစတိုင် လိုက်ဖက်ရန် ရွေးချယ်စရာများစွာမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Flashes Lenses / Filters Batteries အခြား